Ny iPhone 6 sy 6 plus dia tsy azo vidiana intsony ao amin'ny Apple Store | Avy amin'ny mac aho
Ny iPhone 6 sy 6 plus tsy afaka vidiana ao amin'ny Apple Store intsony
Nanomboka androany, ny taranaka mahomby indrindra amin'ny orinasa miaraka amin'ny paoma manaikitra dia nidina teo amin'ny tantara. Mbola terminal tsara io, mbola misy sy mahery izao. Hanohy havaozina mandritra ny roa taona farafahakeliny izy io ary maro no nividy azy io, saingy ao amin'ny Apple Store dia efa betsaka kokoa. Ny iPhone 6 sy 6 plus, maodely 2014, dia nanjavona tao amin'ny magazay sy ny katalaogin'i Apple. Rariny ve ny misintona azy noho ny fahatongavan'ilay iPhone 7? Ie.
Avy eo dia homeko anao ny antony tsy hividianana ny iPhone 6 ary maninona no tsy ho ela dia ho terminal efa antitra na ambany izy io.
Nijanona tsy nivarotra ny iPhone 6 sy 6 plus i Apple
Raha mitady iPhone avy amin'ny taranaka teo aloha ianao na iray mora vidy kokoa, ny zavatra mahazatra dia ny safidinao dia ny iPhone 6, ny SE na ny 6s ankehitriny satria nilatsaka ny vidiny ary nampitombo ny fahafaha-mitahiry. Betsaka ny namana na olom-pantatra no manontany ahy momba ny iPhone 6 na hividy izany na tsia. Mitovy foana ny valinteniko: TSIA.
Ary hazavaiko ny anton'ny fanapaha-kevitro. Manana ny iPhone 6 64Gb aho. Tsy mikasa ny hividy ny 7 na ny terminal izay tonga amin'ny 2017 aho. Miaraka amin'ny iOS 10 miasa tsara ny fitaovako ary tsy manome olana na inona na inona amiko, fa izao dia izao. Tsy haiko ato anatin'ny herintaona na roa ny fomba fiasa. Raha mitady iPhone ianao dia satria tianao haharitra io, izany no antony anolorako hevitra anao hividy modely farany indrindra. Ny anton-javatra manan-kery lehibe eritreretiko dia ny fahefana, satria ny olona mitady terminal efa taloha dia tsy mijery ny 3D Touch na ireo zavatra ireo, dia mitady fahombiazana sy hery. Ny iPhone 6 dia manana 1Gb Ram ary mandeha tsara. Fa ny 6s dia miakatra amin'ny 2Gb, ary ny 7 miampy 3Gb aza. Mety ho amin'ny ho avy izay hamela ny iPhone 6 lany andro.
Ankehitriny dia nanjavona tao amin'ny magazay izy ary ny safidy dia ny iPhone SE, 6s ary 7. Afa-tsy ny 4-inch, ny ambiny dia ao amin'ny 32, 128 ary 256Gb. Ny 6 dia ho hita amin'ny 16 na 64 fotsiny, kely ary tsy tokony vidiana. Iza no manana azy hankafy azy, ary iza no mitady vaovao hotadiavina ny faha-7, mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Ny iPhone 6 sy 6 plus tsy afaka vidiana ao amin'ny Apple Store intsony
Araka ny voalazan'i Tim Cook: ny zava-misy marobe dia tsara kokoa noho ny virtoaly
Ny iPhone 7 Plus, ny loko mainty ary ny 128 GB, ireo ankafizin'ny presale